Hifamotoana eny Imerinkasinina, hamboly hazo ny eo anivon’ny antoko Tim, rahampitso asabotsy tontolo andro. Sambany indray ny fiarahan’izy ireo amin’ny filoha teo aloha, amin’ny fambolen-kazo tahaka izao raha notarihin’ireo lohandohany ihany ny Tim tamin’ny fanaovana izany adidy izany. Efa teto ihany ny filoha nasionaly, Ravalomanana tamin’ny taon-dasa, saingy tsy afa-niteny sy narahi-maso akaiky.
Hanao ny tomban’ny fifidianana loholona nokarakarainy ny eo anivon’ny Ceni, anio eny Alarobia. Hoentin’izy ireo amin’izany koa ny sosokevitra samihafa avy amin’ireo hery politika sy antoko na fikambanana ary koa ireo avy amin’ny fiarahamonim-pirenena, hanatsarana ny fifidianana.
Tsiahivina fa nahazo tsiny sy tsikera mivaivay amin’ireo mpanao politika ny Ceni tamin’ny fifidianana farany teo.
Tsy mitombina ny filazana fa mikorontana ny HVM any Manakara, araka ny nambaran’ny minisitra mpiahy, Ramparany Anthèlme, omaly tamin’ny haino aman-jery. « Misy ny dingana samihafa arahina sy hajaina tamin’ny fandefasana ny lisitra any amin’ny filoham-pirenena. Tompon’ny teny farany izy amin’ny olona hotendrena », hoy izy, manoloana ny nanendrena ny Kly Botomanovatsara avy amin’ny Mapar ho loholona. Nohitsiny fa tafiditra amin’ny fametrahana fitoniana sy ho tombontsoan’ny firenena izany.